DAAWO:- Kheyre oo balanqaaday in uu difaacayo Shaqalaha Shirkadaha Turkiga ee dhismaha kuwada jidadaka waawayn. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO:- Kheyre oo balanqaaday in uu difaacayo Shaqalaha Shirkadaha Turkiga ee dhismaha kuwada jidadaka waawayn.
DAAWO:- Kheyre oo balanqaaday in uu difaacayo Shaqalaha Shirkadaha Turkiga ee dhismaha kuwada jidadaka waawayn.
January 20, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 1
Kulanka Ra'iisul Wasaare Khayre Iyo Maamulaha Shirkadda Enez
Ra’iisul Wasaare Hassan Ali Khaire Iyo Maamulaha Shirkadda Enez ayaa Ka Hadlay Dardar Gelinta Dhismaha Waddada Isku Xirta Muqdisho Iyo Afgooye.#NabadIyoNolol#AmaanoIyoAdeeg
Posted by OPM Somalia on Monday, January 20, 2020
Farmaajo oo saxiixay heshiis Turkiga uu ku baaran karo Shidaalka kujira Xeebaha Somalia.
Waxaanu shaki haba yaraato ee ku jirin in aanu dunida ka jirin dal Turkiya Soomaaliya u dhaama oo uga sokeeya. Taariikh fac weyn ayaa labadan ka dhexeeya oo Turkidu waa geesiyaal aan la loodin karin xaqiiqdii. Wayna ogsoon yihiin in ay Soomaalida siyaabo badan isu shabbahaan oo ay isku halleyn karaan haddii ay is raacdo.
Waxaan se anigu u arkaa in ay Turkidu awalkii hore ba qalad straatiji ah ku dhaceen markii ay rugtooda Xamar ka dhigteen oo isku na soo koobeen. Waxaa seegtay in ay Puntland ka yeeshaan saldhiggooda ugu weyn ay se Xamar safaarad ahaan u joogaan. Hadafyadooda oo dhan ayay si sahlan ku gaari lahaayeen oo amnigoodu aanu shaki ba ku jireen haddii ay Boosaaso xaruntooda ka dhigan lahaayeen.
Si xun ayay taasu u seegtay oo waxaa ba ka sii daran oo aan qudhaydu filaayay in ay gadaal ka fikiri doonaan oo ay taladaas soli doonaan, ma se dhicin oo waa kuwan maanta naftoodii baa Xamar qiirqiir ku gashay. Macal asaf.